တရုတ်-မြန်မာအဓိကရုဏ်း စိတ်ကူးမယဉ်လုိုက်ကြပါနဲ့ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« လှည့်ကွက်တွေကို သတိထား
ကုလားမယားဖြစ်မှာထက် အများ မယားဖြစ်နေတာကို ၉၆၉ တို့ သတိချပ်ပါ »
တရုတ်-မြန်မာအဓိကရုဏ်း ဖြစ်နုိုင်သလား December 31, 2014
လုံးဝ လုံးဝ မဖြစ်နုိုင်ပါဘူး။
ဖြစ်တာနဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဒလိန့်ခေါက်ကွေး ပြုတ်ကျဖုို့ အစပြုတာဘဲလုို့သာ အသေအချာ ယူဆလုိုက်ပါ။
ဦးသိန်းစိန်မတက်ခင်လေး ဗုိုလ်သန်းရွှေလက်ထက် ကုိုးကန့်သူပုန်တွေနဲ့ ပြသနာတက်လုို့ တရုပ်ပုိုင်လုပ်ငန်းတွေကုို သိမ်းဆည်းတာ၊ ဖမ်းဆီးတာကုို မှတ်မိကြလား။
တရုတ်က မျက်မာန်ရှပြီး ချက်ချင်းဆင့်ခေါ်လုို့ ဗုိုလ်သန်းရွှေတစ်ယောက် တရုတ်ပြည်ကုို ကမန်းကတန်း အခစားထွက်ခဲ့ရပါတယ်။
တရုတ်သမ္မတက မြန်မာပြည်ရှိတရုတ်တွေနဲ့ တရုတ်အကျိုးစီးပွါးတွေ စောင့်ရှောက်ဖုို့ ဗုိုလ်သန်းရွှေကုို ဗြောင်ရာဇသံပေးတာကုို မြန်မာသတင်းစာတွေက သတင်းထည့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့်ဆုိုရင် ဒီသတင်းမျိုးက မှန်ရင်တောင် မြန်မာအစုိုးရက မြန်မာပြည်သူတွေကြားမှာ အရှက်ကွဲခံပြီး ဘယ်တော့မှ မဖေါ်ပြပါဘူး။ အခုဟာက တရုတ်က ဒီသတင်းကို မြန်မာသတင်းစာမှာ မြန်မာပြည်သူတွေသိအောင် ရေးသားဖေါ်ပြပေးရမယ်ဆုိုတဲ့ ရာဇသံပါ ပါလာတဲ့အတွက် ကြောက်ကြောက်နဲ့ လိုက်နာခဲ့ရတာပါ။
ဝမ်ပေါင်ဆန့်ကျင်ရေးတွေ ဖြစ်လာတာကြောင့် ကုိုးကန့်ခေါင်းဆောင် ဖုံကြားရှင်က ကုိုးကန့်နယ်မြေကုို ပြန်တုိုက်ယူမယ်ဆုိုပြီး တရုပ်ပြည်မှာ မနေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်လုိုက်တာကလည်း မတော်တဆ တုိုက်ဆုိုင်မှု မဟုတ်ဘူး။ တရုတ်အစုိုးရက မြန်မာအစုိုးရကုို ခပ်တင်းတင်း၊ ခပ်ပြောင်ပြောင် သတိပေးလုိုက်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုပ်အပေါ် မြန်မာစစ်အစုိုးရက ဘယ်လောက်ကြောက်ရတာကိုလည်း ဗာရာဏသီချဲ့ပြီး ရေးစရာမလိုပါဘူး။ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကိုယ်တုိုင် ဗြောင်ဖွင့်ပြော ဝန်ခံခဲ့တာ လူတိုင်းသိနေကြပါတယ်။
သူတုို့အာဏာကုို အံတုရင် ဘယ်လုိုလုပ်တယ်ဆုိုတာ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်မှာ တွေ့နုိုင်သလို တရုတ်အကျိုးစီးပွါးကုို ဆန့်ကျင်ရင် ဘာဖြစ်နုိုင်တယ်ဆုိုတာ ၂၀၁၂ လက်ပံတောင်းမှာ ဘုန်းကြီးတွေကုိုတောင် မီးလောင်ဗုံးကပ္ဗိတာကုို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အလွယ်သိနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က တရုတ်တွေ စိတ်မပူကြပါနဲ့။
တရုတ်ပြည်က တရုတ်တွေထက်တောင် လုံခြုံရေးက အများကြီးစိတ်ချရပါတယ်။
အစိုးရတပ်အား ပြန်လည်ခုခံရန် ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင် ဖုန်ကြားရှင် ပြန်လာပြီဟု ဆို
ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖုန်ကြားရှင်သည် ၂၀၀၉ နောက် ပိုင်း ၅ နှစ်ကြာ မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက် အစိုးရတပ်အား တိုက်ခိုက်မှုများတွင် ပြန်လည် ပါဝင်တော့မည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ကြောင်း၊ ယနေ့ ထုတ် Globcal Times တရုတ်သတင်းစာ က ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ အင်တာဗျူးတွင် အသက် ၈၄ နှစ်ရှိ ဖုန်ကြားရှင် က ၄င်း၏ အမျိုးသား ဒီမိုကရက် တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်သည် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အစိုးရစစ်တပ်နှင့် ယှဉ်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးပွဲအား ဒီဇင်ဘာ ၂၁ မှ ၂၃ ထိ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ် ထားသော်လည်း အစိုးရတပ်က ကချင်တပ်ဖွဲ့စခန်းအား တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် တပ်များတိုးချဲ့ချထားခြင်းတို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များမှာ တိုက်ပွဲဝင်ရန် ဖိအားပေးခံရသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်ဟု ဖုန်ကြားရှင်ကဆိုသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၉ မှ ၁၃ အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများ တွင် အစိုးရ စစ်သား တစ်ရာခန့်ကျဆုံးခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ စီစဉ်ထား သည့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ အစိုးရတပ်နှင့် တိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့များမှ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ မပါဝင်ဘဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မန်ဒရင်းဘာသာအား ယူနန်လေယူလေသိမ်းနှင့် ပြောကြားသည့် ဖုန်ကြားရှင် က “ကိုးကန့်ဒေသ ကို ပြန်ရတဲ့အထိ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်ခိုက်သွားမှာပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ပဋိပက္ခတွင် ကိုးကန့်ဒေသအား ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး နအဖအစိုးရ လိုလားသည့် ပြိုင်ဘက်အား ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့် ဖုန်ကြားရှင်သည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ နောက်တစ်နှစ်တွင် အပြင်းအထန် နာမကျန်းဖြစ်ခဲ့ပြီး လမ်းပင်မလျှောက်နိုင်ခဲ့ဟု ဆိုသည်။ ထိုစဉ်က သေဆုံးမသွားခြင်းမှာ ဘုရားသခင်က သူ့အတွက် အစီအစဉ် ရှိနေသေး၍ ဖြစ်သည်ဟု ဖုန်ကြားရှင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖုန်ကြားရှင်သည် ၂၀၁၂ တွင် ကချင်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး ဒေသခံခေါင်းဆောင်များကို အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
ထိုသို့ ပြန်လာမှုမှာ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၏ အစဖြစ်သည်ဟု ဖုန်ကြားရှင်က Global Times သို့ ဖြေကြားခဲ့သည်။
Ref – Global Times
This entry was posted on December 31, 2014 at 8:36 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.